U ADEEGSADA ICE - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work > U adkaysiga ICE
U adkaysiga ICE
Markhaati ka noqo waxqabadka ICE, ama waxaad u maleyneysaa inaad noqon karto?
Wac 1-844-864-8341 oo wac 1 si aad ula hadasho dirid
Soo diraha ayaa ku weydiin doona goob dheeri ah iyo faahfaahinta xaalada adiga, ka dibna u diro tabaruceyaal tababbaran goobta
Haddii duulaan ICE uu socdo, tabaruceyaashu way duubi doonaan dhacdada, waxay raadinayaan inay aqoonsadaan wakiillada ka qayb qaadanaya, waxayna xasuusinayaan kuwa ku lugta leh xuquuqdooda dastuuriga ah.
Dhacdada kadib, haddii ay suurtagal tahay, mutadawiciinno ayaa kula socon doona inay kugula xiriiraan xubin maxalli ah oo ka tirsan hay'adda CIRC ee gobolka oo dhan 'DocuTeam', oo kula shaqeyn doonta adiga si ay u diiwaangeliso dhacdada oo kuu gudbiso ilaha sharciga haddii loo baahdo.
Marabtaa inaad soosheegto isdhexgal hore ee ICE?
Wac khadka taleefanka oo garaac 2 si aad fariin uga tagto. Hubso inaad sheegto lambarka taleefankaaga iyo magaaladaada.
Xubin ka tirsan DocuTeam oo kuu dhow ayaa kula soo xiriiri doonta 3-4 maalmood oo shaqo gudahood waxayna kula shaqeyn doonaan si ay u diiwaangeliyaan dhacdada.
Dukumiintiyada waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo wada shaqeynta booliska / ICE, laguna ogaado qaababka hagi kara dadaalkeena sharci dejinta, iyo in la dhiso shabakad xoogan oo gobolka oo dhan ah oo dadka diida tarxiilka bulshooyinkooda. Markhaatifurka dadka sida tooska ah saamaynta ugu yeeshay wuxuu ka caawiyay Colorado inay tirtirto sharcigeena "i tus waraaqahaaga" oo ku qasbay booliiska maxalliga ah inay u shaqeeyaan sidii wakiillada ICE 2013.
Ku biir Docuteam! Caawi Diiwaangelinta Xadgudubyada ICE!
La daabacay: March 24, 2022
Docuteam waa koox mutadawiciin ah oo CIRC ah oo u jawaaba dadka wacaya khadka tooska ah ee dukumeentiga si ay uga warbixiyaan dhacdo ICE
ICE & Meelmarinta Sharciga
Tan iyo markii ICE la abuuray 2003, hay'addu waxay samaysay tiro badan oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha, qoysaska kala go'ay, iyo masaafurinta magangalyo-doonka ee da'doodu tahay laba bilood jir xaaladaha qatarta ah ee dalalkooda.
GEO kharash gareeya 2.7 bilyan doolar canshuur bixiye sanad kasta in la xiro 50,000 oo muhaajiriin ah
Wakiilada ICE ayaa helay Cabashooyinka 14,700 sheeganaya xadgudub galmo iyo jir ahaaneed intii u dhaxeysay 2010 iyo 2016
Qiimaha COVID-19 waa Saacadaha 13 ka sareeya xarumaha dadka lagu hayo ee ICE marka loo eego dadweynaha guud
CIRC waxaa ka go’an inay la xisaabtanto hay’adan khayaanada ah. Taasi waa sababta aan ula kaashanay ururada dhamaan Colorado si loo sameeyo Shabakada Jawaabta Degdega ah ee Colorado (CORRN) oo aan u wadno khadka tooska ah ee 24/7 qofkasta oo goobjoog u ah ama la kulmaya waxqabadka ICE. Qadka taleefanka waxaa lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish 1-844-UNITE-4-1, ama 1-844-864-8341. Waxaan sidoo kale bixinaa tababaro jaaliyadeed oo bilaash ah oo ku saabsan ogaanshaha xuquuqdaada markaad la macaamilayso ICE. Haddii aad xiisaynayso in aad hesho tababar ama noqdo tababare, fadlan la xiriir qabanqaabiyahaaga gobolka.
Sannadka 2020 oo keliya, waxaan…
Kajawaabay 94 wicitaanada khadka tooska ah
siiyey 53 bulshada xubnaha “Ogow Xuquuqdaada” tababarka
Dukumiintiyo 41 la kulmo xadgudub ICE
Sidee CORRN u shaqeeyaa
Soo wacayaashu waxay isticmaali karaan khadka tooska ah ee 24/7 si ay u soo sheegaan waxqabadka socda ee ICE ama ay ku diiwaangeliyaan khibrad hore ee ICE. Haddii wicitaanku yahay waxqabadka hadda jira, tabaruceyaal tababbaran ayaa goobta ka jawaabi doona si ay u diiwaangeliyaan waxqabadka una hubiyaan in dhammaan kuwa ku lugta leh ay ogaadaan xuquuqdooda. Haddii kale, qofka soo waca wuxuu ka tagi karaa farriin xubin xubin ka ah CORRN DocuTeam ayaa la socon doonta iyaga si ay u duubaan faahfaahinta sheekadooda. Waxaan u isticmaalnaa dukumiinti si aan ula socono iskaashiga booliiska / ICE, waxaan helnaa qaabab hagi kara dadaalkeena sharci dejinta, iyo dhisida shabakad xoogan oo gobolka oo dhan ah oo dadka diida tarxiilka bulshooyinkooda. Markhaatifurka dadka sida tooska ah saamaynta ugu yeeshay wuxuu ka caawiyay Colorado inay tirtirto sharcigeena "i tus waraaqahaaga" oo ku qasbay booliiska maxalliga ah inay u shaqeeyaan sidii wakiillada ICE 2013.
CORRN wuxuu ka kooban yahay xubnahan soo socda: Guddiga Adeegga Saaxiibbada Mareykanka, Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado, Isbahaysiga Dadka ee Colorado, Mi Familia Vota, Padres y Jóvenes Unidos, Wadajir Colorado, iyo United oo loogu talagalay Dhaqaalaha Cusub.
Shabakadda waxaa sidoo kale taageera SEIU Local 105, Cutubka Colorado ee Qareennada Qaranka Guild, iyo Ururka Qareennada Socdaalka Mareykanka.
Taariikhda CIRC ee iska caabinta ICE
2006: Mid ka mid ah sharciyadii ugu horreeyay ee waddanka ee “I tus waraaqahaaga” waxa uu marayaa Colorado: SB90. CIRC waxay gacan ka geysataa abaabulka socod mudaaharaad, 100,000 oo qofna way ka soo qayb galeen.
2010: Sarkaal booliis ayaa ICE u xidhay Edgar Niebla xubinta bulshada galbeedka Colorado. CIRC waxay abaabushay olole lagu sii dayn lahaa, waxayna si guul leh u joojisay masaafurinta 24 saac gudahood. Kani waxa uu ahaa ololihii ugu horeeyay ee lagu guulaysto ka hortagga masaafurinta dadweynaha ee Colorado.
2012: Markay masaafurisyadu korodho, CIRC waxay bilawday khadka telefoonka ee gobolka oo dhan si ay uga warbixiso dhaqdhaqaaqa ICE. Ururku wuxuu la shaqeeyaa dadka soo wacaya khadka telefoonka si ay u ururiyaan markhaatiyada sida SB90 u waxyeeleeyo bulshada, iyo olole lagu tirtirayo sharciga.
2013: Ololihii baabi'inta SB90 waa lagu guuleystay! Colorado waxay noqotaa gobolka ugu horreeya ee dalka ee burinaya sharcigeeda "I tus waraaqahaaga". Khadka taleefoonku wuu fidayaa, kooxda ka jawaabista khadka telefoonkana waxay bilaabeen tababar ku saabsan iska caabinta masaafurinta si ay taageero dheeraad ah u siiyaan dadka soo wacaya.
2014: Madaxweyne Obama wuxuu daahfurayaa Barnaamijka Hirgalinta Mudnaanta, asagoo weydiinaya fulinta sharciga maxalliga ah inay ku wargeliyaan ICE marka laga shakiyo muhaajiriinta laga sii daayo xabsiga oo lagu dhex daro bulshadayada nidaamka tarxiilka.
2015: CIRC iyo ACLU ee Colorado waxay la shaqeeyaan shariifyada CO si ay uga dhaadhiciyaan inay diidaan maxbuuska ICE - codsi ay ICE u gudbiso jeelasha maxalliga ah si loo ilaaliyo dadka la xiray wixii ka dambeeya waqtigooda siideynta markii looga shakiyo inay yihiin sharci-darro. Colorado waxay noqoneysaa gobolkii ugu horeeyey ee qaran degmo kastaa ay si rasmi ah u diiddo adeegsiga codsiyada maxaabiista ee ICE oo aan dastuurka waafaqsanayn.
2016: U diyaargarowga waxqabadka ICE ee kordhay, CIRC waxay ku biirtay ururada gobolka oo dhan si loo bilaabo Shabakada Jawaab celinta Degdegga ah ee gobolka (CORRN)
2017: Madaxweyne Trump wuxuu saxeexay amarka fulinta si si weyn kor loogu qaado waxqabadka ICE isla markaana lagu dhiirrigeliyo bilayska maxalliga ah inay u shaqeeyaan sidii saraakiisha socdaalka.
2018: CIRC waxay dukuminaysaa ICE sharci darro ah oo ka dhacaya xabsiga degmada El Paso. Ururku wuxuu la shaqeeyaa ACLU si ay u dacweeyaan waaxda sheriff, iyagoo ku guulaysta amar.
2019: CIRC iyo sharci dejiyeyaasha gobolka ayaa abuura Sharciga Virginia si looga ilaaliyo qoysaska soogalootiga ah ee ku nool Colorado faro-gelinta federaalka ee bulshadayada. Qaybo xasaasi ah oo ka mid ah sharcigan ayaa lagu ansixiyay Benavidez Bill.
Mamnuucida wadaagista macluumaadka tijaabada iyadoon waaran qabin
Waxay ubaahantahay fulinta sharciga deegaanka si ay ula taliyaan muhaajiriinta la xiray xuquuqdooda ayna helaan ogolaansho qoraal ah kahor inta aan loo ogolaan ICE inay wareystaan.
Wuxuu Colorado ka dhigayaa gobolkii 4-aad ee meel-mariya biil gobolka oo dhan xaddidaya wada-shaqeynta booliska iyo ICE. Ka aqri biilka bogga sharci dejinta ee Colorado.
2021: CIRC waxay lashaqeysaa sharci dejiyeyaasha sidii loo abuuri lahaa biil loogu talagalay macluumaadka asturnaanta ee dhammaan, si looga horjoogsado ICE inay hesho macluumaadka soogalootiga ee hay'adaha gobolka ama kuwa maxalliga ah sida rugaha caafimaadka ama DMV iyadoon loo haysan waaran dembi ama yeeris. Booqo Ololeheena Xogta Asturnaanta Dhammaan si aad wax badan ka bartaan.
Under maamulka Obama, barnaamijyo dhowr ah ayaa la ballaadhiyey oo laga caawiyo ICE hesho sharci fulinta deegaanka si ay shuqulka wasaq ay sameeyaan. Tani waxaa ka mid ahaa barnaamijka 287 (g), kaas oo u oggolaanaya saraakiisha bilayska ee gobolka iyo kuwa maxalliga ah inay u shaqeeyaan sidii wakiilo rasmi ah ICE, qabashada iyo xiritaanka xubnaha bulshada ee hirgelinta socdaalka. Ayadoo laga dan leeyahay soogalootiga iyo sharci fulinta, 287 (g) heshiisyo qoysas kalasooca, jabiya kalsoonida xubnaha bulshada iyo booliiska maxalliga ah, iyo in laga dhigo qof walba amni yari.
CIRC waxay iska caabinaysay iskaashiga booliiska-ICE ee Colorado ilaa 2006. Sanadkii 2015, CIRC iyo ACLU ee Colorado waxay isla shaqeeyeen si ay ugu qanciyaan shariifyada inay joojiyaan isticmaalka ICE haynta. Waxay ku qanciyeen dhammaan shariifyada Colorado inay joojiyaan kaqeybgalkooda barnaamijka 287 (g) - illaa 2019, marka Teller County ay heshay heshiis 287 (g) xabsi ah. Tani waxay ka dhigan tahay in ku-xigeennada Degmada Teller County ay u noqon karaan wakiillo ICE ah inta ay xabsiga ku jiraan. Si kastaba ha noqotee, weli looma oggola inay bartilmaameedsadaan dadka ka baxsan xabsiga si loo hayo ama loo masaafuriyo.
CIRC waxay ku jirtaa iska caabin firfircoon oo ka dhan ah heshiiskan ugu dambeeyay ee haray ee 287 (g). ACLU-da Colorado waxay hadda la dagaallameysaa inay ku dhammeyso dacwad.
Dukumeentiyadu waxay muujinayaan sida ICE u isticmaasho xogta LexisNexis si ay ugu dhowaato sharciyada Colorado; Saraakiisha fulinta sharciga ee Colorado waxay ku fadhiyaan guddiga LexisNexis ee maamulka Denver, CO - Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamka (ICE) waxay qandaraas la gashay shirkad dallaal xogeed ujeedo cad oo ka dhan ah siyaasadaha macbudka ee Colorado, kaas oo loogu talagalay in laga hortago iskaashiga fulinta sharciga […]
Takoorka Jinsiga, Xoog Xad dhaafka ah, Aargoosiga Lagu Eedeeyay Xarunta Dadka lagu hayo ee ICE
Takoorka jinsiyadeed, xoog xad dhaaf ah, aargoosi lagu eedeeyay xarunta ICE
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxay bogaadinaysaa go'aanka Maxkamadda Racfaanka ee dib u soo celinta dacwadda ka dhanka ah Teller County 287(g) heshiiska socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka (ICE). Dacwadda ayaa u keentay magaca Ururka Xorriyadda Madaniga ah ee Mareykanka (ACLU) ee Colorado, xubin CIRC, ujeedadeedu tahay in la soo afjaro heshiiska u adeegsanaya doollar canshuur bixiyayaasha si loogu maalgeliyo ICE khatarta ah.
Sabotaging Sanctuary: Sida Xog-Bixiyeyaasha Xogta u Siiyaan Gelitaanka Albaabka Barafka ee Xogta Colorado iyo Jeelasha
Warbixin naxdin leh oo cusub oo la sii daayay Abriil 2022 ayaa faahfaahinaysa sida Kastamyada Socdaalka iyo Dhaqangelinta (ICE) ay u isticmaalayaan dullaaliinta xogta iyo shirkadaha tignoolajiyada sida LexisNexis ee Colorado si ay u hareer maraan siyaasadaha iyo sharciyada quduuska ah.
Barnaamijka 287 (g): Dulmar guud
Barnaamijka 287 (g) waxaa loogu magac daray Qeybta 287 (g) ee Sharciga Socdaalka iyo Jinsiyadaha (INA) wuxuuna noqday sharci qeyb ka ah Dib u habeynta Socdaalka Sharci darrada ah iyo Mas'uuliyadda Muhaajiriinta ee 1996 (IIRAIRA).
Sharciga Benavidez (oo loo saxiixay sharciga 2019)
Ka ilaali dadka deggan Colorado inay ku soo xadgudbaan Dowladda Federaalka
Nolosha Ku hoos jirta PEP-COMM
La talintaani waxay sharraxeysaa foomamka mudnaanta fulinta (PEP) iyo mudnaanta.
Ogow Xuquuqdaada Xaaladda Waxqabadka ICE
Waxa La Sameeyo Markaad Dhexgalneyso ICE
Su'aalaha ku saabsan SB251, oo ay ku jiraan sida loo helo liisankaaga iyo halka laga helo macluumaad dheeraad ah.
Haddaad markhaati ka tahay waxqabadka ICE ama ICE ay albaabkaaga ka soo galaan, fadlan wac Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah ee Colorado. Waxaa laga heli karaa 24/7 lambarka (844) 864-8341 si looga jawaabo wixii su'aalo ama walaac ah ee aad qabtid; Xaqiijiyayaashu waxay ku hadlaan Isbaanishka iyo Ingiriiska.